June 2019 - Swelsone News
ခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အကြောညပ်နေသလား .. ဒီ Post လေးကို ဖတ်လိုက်ပါ (တင်ပါးခွက်ကိုက် Sciatica ရောဂါ)
အဆိုးဝါးဆုံးရောဂါပါ… အခံရအခက်ဆုံး ရောဂါပါလို့ကျနော်ပြောလျှင် ယုံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ.. ကိုယ်တိုင်မှ မခံစားဖူးတာကိုး။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ ခါးကြီးစေါင်းငန်းစေါင်းငန်းနဲ့ သွားနေသူတွေ။ တင်ပါးခွက်ကလေးကို ဖိကာပွတ်ကာ သွားလာနေတဲ့သူတွေ။ ပေါင်ကိုက်ဒူးကိုက် ခြေသလုံးတလျှောက် ထုံကျင်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ရင် အင်တာဗျူးကြည့်ပါ။ လေသံတခုတည်း ထွက်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်
ကမ္ဘာအကြီးဆုံး လေယာဉ်သင်္ချိုင်း (ရုပ်သံဖိုင်)
ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေယာဉ်သင်္ချိုင်း (သို့) အမေရိကန်လေတပ်သင်္ချိုင်း ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံ အရီဇိုးနားသဲကန္တာရအတွင်းမှာရှိပြီး လေယာဉ် စုစုပေါင်း ၄၄၀၀ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ Davis-Monthan လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကတော့ လေတပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ ၃၀၉ (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group(AMARG)) ရဲ့အသုံးမပြုတော့တဲ့ စစ်ဘက်သုံးလေယာဉ်တွေ
မုဒိန်းကောင်များ ကို ခုခံတဲ့ သားအမိ ၂ ယောက်ကို ရိုက်နှက်ပြီး ခေါင်းတုံးခံရ
၂၆ ဇွန်လ ၂၀၁၉ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bihar မြို့တွင် နေအိမ်ထဲ သမီး နှင့်မိခင်တို့အိမ်မှာ ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။ ဖိတ်ခေါ်မထားသည့် လူတစ်စုက သူမတို့အိမ်ထဲကို အတင်းပြေးဝင်လာသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အပြီး မွေးဖွားပြီးချိန်မှာတော့ ပုံမှန်အနေနဲ့ ၄၅ ရက်ဆိုရင် အတူနေလို့ရပါပြီနော်။ အတူနေလို့ရပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ခုရှိတာကတော့ မိခင်က နို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်မျိုးဥက မကြွေတတ်တာကြောင့် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူတူနေထိုင်တဲ့အခါ နာတာ၊
အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံး အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး သေဆုံး … 1
မထမဆုံး အတွေအကြုံမှာ ကွန်ဒုံး အစား ပလတ်စတစ် စွတ်လို့ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ စုံတွဲအဖြစ်
ဗွီယက်နမ် နိူင်ငံ ဟိုချီမင်းမှာ စုံတွဲ တစ်တွဲ သမီးရည်းစားဖြစ်တာလည်းကြာပြီ။ သူတို့၂ ဦးက ပထမဆုံး ဆက်ဆံဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ခက်တာက ၂ ဦးလုံးက ကောလိပ် ကျောင်းသား
SHARE သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွံ့ဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွံ့မလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက
မုန့်ဟင်းခါး ထဲ လူတိုင်းလိုလို ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော် ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကြောင်း
မြန်မာတွေကြိုက်လှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး မှာ ပါတဲ့ အကြော် ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ ဒီနေ့ မြောက်ပြင်ဘက်သွားရင်း မုန့်ဟင်းခါးသည်မြင်တော့ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ ဝင်စားမိတယ်… အရမ်းကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့…. ဟယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်ဆိုပီး အကြော်ပိုလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေးတောင် တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်…. အကြော်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုပီး
သေကြောင်းကြံစည်တဲ့ ကျောင်းသူကို စွန့်စွန့်စားစားကယ်တင်ခဲ့တဲ့ မီးသတ်သမား ရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဗီဒီယို
ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထပ်မြင့်နေအိမ်ဝရံတာတစ်ခုကနေ ခုန်ချပြီး သေကြောင်းကြံစဉ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ စွန့်စွန့်စားစား အချိန်ကိုက် ကယ်တင်လိုက်ရသည့် ရုပ်သံမှာ အွန်လိုင်းတွင် လတ်တလောရေပန်းစားလူကြည့်များတဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ရုပ်သံမှတ်တမ်းအရ အမျိုးသမီးလေးဟာ ဝရံတာလက်တန်းပေါ်မှာ
ရုံးချုပ် ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက် စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ် ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃ လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ